Ny andraikitry ny fiangonana - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > Ny fiangonana > Ny asan'ny fiangonana
Ny paik'olombelona dia miankina amin'ny fahatakaran'ny olombelona voafetra sy ny fanombanana tsara indrindra azon'ny olona atao. Ny mifanohitra amin'izany ny paikadin'Andriamanitra, ny lazany eo amin'ny fiainantsika dia mifototra amin'ny fahatakarana tanteraka ny tena zava-misy sy farany. Izao no tena voninahitry ny Kristianisma: aharihary ny zavatra aseho arak'izay tena misy azy ireo. Ny fandalinana ny Kristiana amin'ny aretina rehetra eto amin'izao tontolo izao, hatramin'ny fifanolanana misy eo amin'ny firenena ka hatramin'ny fihenjanana ao amin'ny ain'olombelona, ​​dia marina satria taratry ny fahatakarana marina ny toetry ny olombelona.
Manomboka amin'ny fahamarinana hatrany ny taratasin'ny NT, antsointsika hoe "fampianarana" izany. Ny mpanoratra NT dia miantso anay ho amin'ny zava-misy. Rehefa voafaritra io fototry ny fahamarinana io dia apetrany amin'ny fampiharana ny fampiharana azo ampiharina. Fa hadalana tokoa ny manomboka amin'ny zavatra hafa ankoatry ny fahamarinana.
Ao amin'ny toko voalohan'ny taratasy ho an'ny Efesiana dia nanao fanambarana mazava maromaro momba ny tanjon'ny Fiangonana i Paoly. Tsy mikasika ny tanjona mandrakizay, ny nofinofy ho avy, fa ny tanjona eto sy ankehitriny.
Tokony haneho ny fahamasinan'Andriamanitra ny fiangonana
“Fa tao aminy no nifidianany antsika fony tsy mbola ary ny fanorenan’izao tontolo izao, mba ho masina sy tsy hanan-tsiny eo anatrehan’ny tavany isika” (Efesiana). 1,4). Hitantsika tsara eto fa tsy fihevitr’Andriamanitra fotsiny ny fiangonana. Efa nomanina ela be talohan’ny nahariana izao tontolo izao.
Ary inona no mahaliana voalohany an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana? Ny zavatra voalohany izay mahaliana azy dia tsy ny ataon'ny fiangonana fa ny Fiangonana ihany. Ny mialoha antsika dia tokony hatao mialoha, satria izay mamaritra antsika no mamaritra izay ataontsika. Mba hahatakarana ny toetran'ny vahoakan'Andriamanitra dia ilaina ny mahatakatra ny toetran'ny Fiangonana. Amin'ny maha kristiana antsika, tokony ho ohatra ara-moraly an'izao tontolo izao isika amin'ny fanehoana ny toetra madio sy ny fahamasinan'i Jesoa Kristy.
Mazava ho azy fa ny tena kristiana, na arseveka na pasiterista tsotra, dia tokony haneho mazava sy maharesy lahatra ny Kristianisany amin'ny fomba fiainany, miteny, manao zavatra ary manao ahoana. Isika Kristiana dia nantsoina hijoro "masina sy tsy misy famaizana" eo anatrehan'Andriamanitra. Tokony hisaintsaina ny fahamasinan-tsika isika, izany koa no tanjon'ny Fiangonana.
Ny fiangonana dia tokony hanambara ny voninahitr'Andriamanitra
Omen’i Paoly tanjona iray hafa ho an’ny Fiangonana isika ao amin’ny Efesiana toko voalohany: “Izy no nanendry antsika tamin’ny fitiavana tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy ho zanany izay ho Azy, araka ny sitrapony, mba hidera ny voninahitry ny fahasoavany” (and. 5). ). “Isika dia tokony hanompo amin’ny fiderana ny voninahiny, dia izay efa nanantena an’i Kristy hatramin’ny voalohany” (and. 12).
Tsarovy izany! Ny sazy: «Nametraka ny fanantenantsika an'i Kristy hatramin'ny voalohany,» manondro antsika kristiana voatendry hiaina ho fiderana ny voninahiny. Ny andraikitra voalohany amin'ny fiangonana dia tsy mahasoa olona. Tena zava-dehibe amin'Andriamanitra tokoa ny fahasalamana, fa tsy izany no andraikitra voalohany nataon'ny Fiangonana. Fa kosa, Andriamanitra no nofidintsika nidera ny voninahiny fa hanambara ny voninahiny amin'izao tontolo izao ny voninahitsika. Toy ny hoe "Fanantenan'ny rehetra": "Tokony hampahafantatra ny olon-drehetra amin'ny fiainantsika izao ny voninahitr'Andriamanitra."
Inona no atao hoe Voninahitr’Andriamanitra? Andriamanitra mihitsy no manambara ny maha-Andriamanitra sy ny asany. Ny olana eto amin’ity tontolo ity dia ny tsy fahafantarany an’Andriamanitra. Tsy azony izy. Amin’ny fitadiavana sy ny fivezivezeny rehetra amin’ny fikatsahany ny fahamarinana, dia tsy mahalala an’Andriamanitra izy. Fa ny voninahitr'Andriamanitra dia tokony haneho an'Andriamanitra mba haneho amin'izao tontolo izao ny tena maha-izy azy. Rehefa aseho amin’ny alalan’ny fiangonana ny asan’Andriamanitra sy ny toetran’Andriamanitra, dia omem-boninahitra Izy. Tahaka an'i Paoly ao 2. Ny Korintiana 4:6 dia milazalaza hoe:
Satria Andriamanitra izay nandidy hoe: "Ny mazava dia mamirapiratra amin'ny maizina!" Izy koa no namela ny fahazavana hamirapiratra ao am-pontsika hamela ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra hamirapiratra eo amin'ny tavan'i Kristy.
Hitan’ny olona ny voninahitr’Andriamanitra eo amin’ny tavan’i Kristy, amin’ny toetrany. Ary izany voninahitra izany, araka ny lazain’i Paoly, dia hita koa “ao am-pontsika”. Miantso ny fiangonana Andriamanitra haneho amin’ izao tontolo izao ny voninahitry ny toetrany hita eo amin’ ny tavan’ i Kristy. Izao koa no voalaza ao amin’ny Efesiana 1, 22-23: “Eny, nametraka ny zavatra rehetra teo an-tongony Izy ka nanao Azy ho lohany ambonin’ny zavatra rehetra ho an’ny fiangonana, dia ny tenany, dia ny fahafenoan’izay mameno ny zavatra rehetra amin’ny olona rehetra.” Fanambarana mahatalanjona izany! Eto i Paoly dia milaza fa ny maha-Jesosy rehetra (ny fahafenoany) dia hita ao amin'ny vatany, ary izany no fiangonana! Ny zava-miafin’ny fiangonana dia ny hoe velona ao aminy Kristy ary ny hafatry ny fiangonana ho an’izao tontolo izao dia ny mitory Azy sy miresaka momba an’i Jesosy. Ambaran’i Paoly ao amin’ny Efesiana indray io zava-miafin’ny fahamarinana momba ny fiangonana io 2,19-22
Noho izany dia tsy vahiny sy mpigadra intsony ianareo fa olom-pirenena feno miaraka amin'ireo olo-masina sy naman'Andriamanitra, norina teo amin'ny fanorenan'ny Apostoly sy ny mpaminany, izay i Kristy Jesosy no fehizoro. Ao aminy, ny rafitra rehetra, mifamatotra tsara, maniry ao amin'ny tempoly masina ao amin'ny Tompo, ary ao anatin'izany koa ianao dia namboarina ho fonenan'Andriamanitra ao amin'ny Fanahy.
Ity ny zava-miafina masin'ny fiangonana, itoeran'Andriamanitra. Mipetraka ao amin'ny olony izy. Io no antso lehibe ananan'ny Fiangonana hampiharihary an'i Kristy tsy hita. Nofariparitan'i Paul ny asa fanompoany manokana ho maodelin'ny Kristiana ao amin'ny Efesiana 3.9-10: "Ary hanome fanazavana ny olona rehetra momba ny maha-zava-dehibe ny fahatanterahana ny zava-miafina izay voarara hatramin'ny andro taloha tany amin'Andriamanitra, Ilay nahary ny zavatra rehetra, koa ankehitriny Ny fahendren'Andriamanitra marobe dia azo ampahafantarina amin'ny manam-pahefana sy ny fahefana any amin'ny faritry ny lanitra amin'ny alàlan'ny fiaraha-monina. "
Mazava tsara. Ny andraikitry ny fiangonana dia ny hoe "haseho ny fahendrena avy amin'Andriamanitra." Izy ireo dia ampahafantarina fa tsy amin'ny olombelona ihany fa amin'ireo anjely izay mijery ny Fiangonana. Ireo dia "hery sy hery any an-danitra." Ho fanampin'ny olona dia misy zavaboary hafa mikarakara ny fiangonana ary mianatra amin'izany.
Mazava ho azy fa ny andininy voalaza etsy ambony dia mazava be: Ny antso amin'ny Fiangonana dia ny manazava amin'ny teny ny toetran'i Kristy izay mitoetra ao amintsika ary hanaporofo izany amin'ny alàlan'ny fihetsintsika sy ny ataontsika. Tokony hitory ny zava-misy iaraha-mahita amin'ny fiovan'ny fiainana amin'i Kristy velona isika ary manazava tsara izany fiovana izany amin'ny alàlan'ny fiainana tsy misy fitiavan-tena feno fitiavana. Mandra-panatanterahantsika izany, tsy hisy zavatra hafa ataontsika hahomby amin'ny tenin'Andriamanitra. Io ny fiantsoan'ny Eglizy resahin'ny nanoratany ny Efesiana 4: 1 hoe: "Koa mananatra anao aho ... Mandehana amim-pahamendrehana ny fiantsoana izay nomena anao."
Mariho ny fomba nanamafisan'ny Tompo Jesosy izany antso izany tao amin'ny toko voalohany, andininy faha-8 amin'ny Asa. Talohan'ny niakaran'i Jesosy tamin'ny rainy dia hoy izy tamin'ny mpianany: «Hahazo hery ianao rehefa tonga ny Fanahy Masina, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia ary Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. . »
Tanjona # 3: Tokony ho vavolombelon'i Kristy ny Fiangonana.
Ny antson'ny Fiangonana dia ny ho vavolombelona, ​​ary ny vavolombelona iray dia manazava sy maneho mazava. Ny apostoly Petera dia manana teny mahafinaritra momba ny fitoriana ny Fiangonana ao amin'ny taratasiny voalohany: « Fa ianareo kosa no taranaka voafidy, fanjaka-mpisorona, fianakaviam-pirenena masina, olona nofidina ho fananany; ny fahazavany mahagaga”. (1. Petrus 2,9)
Azafady mba jereo ny firafitra "Ianao dia ..... ary tokony." Izay no laharam-pahamehantsika amin'ny maha Kristiana. Jesosy Kristy dia mitoetra ao amintsika mba hahafahantsika maneho mazava ny fiainana sy ny toetran'ilay Iray. Andraikitry ny Kristiana tsirairay avy ny mizara io antso ho an'ny Fiangonana io. Antsoina avokoa ny olona rehetra, onenan'ny Fanahin 'Andriamanitra izy rehetra, antenaina fa hahatanteraka ny antson'izy ireo manerantany. Izany no tonony mazava izay maneno manerana ny taratasy ho an'ny Efesiana. Indraindray ny fijoroana ho vavolon'ny Fiangonana dia azo ambara ho vondrona iray, fa ny andraikitra hijoro ho vavolombelona dia an'ny tena manokana. Anjarako sy anjaranao manokana izany.
Nisy olana hafa anefa nipoitra avy eo: ny olana mety ho Kristianisma sandoka. Mora tokoa ho an’ny fiangonana, ary koa ho an’ny Kristianina tsirairay, ny miresaka momba ny fanazavàna ny toetran’i Kristy sy ny manao fanambarana lehibe fa misy manao izany. Maro amin’ireo tsy kristiana izay mahafantatra tsara kokoa ny kristiana no mahafantatra avy amin’ny zavatra niainany fa ny sary omen’ny kristiana dia tsy mifanandrify hatrany amin’ny tena endrik’i Jesosy Kristy ao amin’ny Baiboly. Noho izany antony izany no nilazalazan’ny apostoly Paoly an’io toetra tena mitovy amin’i Kristy io tamin’ny teny nofidina tsara: “Amin’ny fanetren-tena rehetra sy ny fahalemem-panahy rehetra, ary amin’ny faharetana toy ny mifaly, ary miasa fatratra hitana ny firaisana avy amin’ny Fanahy amin’ny fatorana. ny fiadanana." ( Efesiana 4:2-3 ).
Ny fanetren-tena, faharetana, fitiavana, firaisana ary fihavanana no tena toetran'i Jesosy. Ny kristiana dia tokony ho vavolombelony, fa tsy mpirehareha ary tsy masiaka, tsy amin'ny fihetsika "masina noho ianao", tsy amin'ny fiheveran-tena mihatsaravelatsihy ary azo antoka fa tsy ao anaty ady maloto izay ijoroan'ny Kristiana hanoherana ny Kristiana. Tsy tokony hiresaka momba ny tenany ny fiangonana. Tokony halemy fanahy izy, fa tsy hanery ny heriny na hikatsaka laza bebe kokoa. Tsy afaka mamonjy an'izao tontolo izao ny Fiangonana, fa ny Tompon'ny Fiangonana dia afaka. Ny kristiana dia tsy tokony hiasa ho an'ny Fiangonana na hampiasa herinaratra ho azy ireo fa ho an'ny Tompon'ny Fiangonana.
Tsy afaka mitazona ny Tompony ny Fiangonana rehefa manangana ny tenany izy. Ny Fiangonana marina dia tsy mitady fahefana eo imason'izao tontolo izao satria efa manana ny hery rehetra ilain'ny Tompo izay mitoetra ao aminy.
Tokony hanam-paharetana sy hamela heloka koa ny Fiangonana hahafantatra fa ny voan'ny fahamarinana dia mila fotoana hitsimoka, fotoana hitombo ary fotoana hamoa. Tsy tokony hangataka ny Fiangonana fa hiova tampoka haingana ny fiaraha-monina amin'ny endrika efa ela. Tokony haneho ny fiovana ara-tsosialy kosa ny Fiangonana amin'ny alàlan'ny fisorohana ny faharatsiana, ny fanaovana ny fahamarinana, ary amin'ny alàlan'ny fanaparitahana ny voan'ny fahamarinana, izay mamaka ao anatin'ny fiaraha-monina ary mamoa voa fiovana.
Ny marika mampiavaka ny tena Kristianisma
Ao amin'ny bokiny "Decline and Fall of the Roman Empire", i Edward Gibbon, mpahay tantara dia nanondro ny faharavan'i Roma fa tsy hanafika ny fahavalo, fa manimba ny anatiny. Misy fizarana iray ato amin'ity boky ity izay notadidin'i Sir Winston Churchill satria hitany fa mety sy manome torolàlana. Zava-dehibe io fizarana io izay nifandraisany tamin'ny andraikitry ny fiangonana tamin'ny fanjakana nihena.
"Raha notafihan'ny herisetra an-kalamanjana ny rafitra lehibe (Empira Romana) ary nopotehin'ny fikorontanana miadana, dia niditra tsikelikely tao an-tsain'ny olona ny fivavahana madio sy manetry tena, nitombo tao anatin'ny fahanginana sy ny fanetren-tena, notohanan'ny fanoherana ary tamin'ny farany dia nanangana ny fanevan'ny hiampita ny sisa tavela amin'ny Capitol. " Mazava ho azy fa ny fitiavana no famantarana lehibe indrindra amin’ny fiainan’i Jesosy Kristy ao amin’ny Kristianina. Fitiavana manaiky ny hafa araka ny maha izy azy. Fitiavana mangoraka sy mamela heloka. Fitiavana mitady hanasitrana ny tsy fifankahazoana, ny fisaratsarahana ary ny fifandraisana tapaka. Hoy i Jesosy ao amin’ny Jaona 13:35 : “Izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro ianareo, raha mifankatia”. Io fitiavana io dia tsy aseho velively amin’ny alalan’ny fifandrafiana, ny fitsiriritana, ny fireharehana, ny tsy faharetana, na ny fitsarana an-tendrony. Mifanohitra tanteraka amin’ny fanararaotana, ny fanaratsiana, ny ditra ary ny fisaratsarahana.
Eto isika dia mahita ilay hery mampiray mampiray ny Fiangonana manatanteraka ny tanjony eto amin'izao tontolo izao: ny fitiavan'i Kristy. Ahoana no anehoantsika ny fahamasinan'Andriamanitra? Amin'ny alàlan'ny fitiavanay! Ahoana no ampisehoantsika ny voninahitr'Andriamanitra? Amin'ny alàlan'ny fitiavanay! Ahoana no fomba fijoroantsika ho vavolombelona amin'ny maha-marina an'i Jesoa Kristy? Amin'ny alàlan'ny fitiavanay!
Tsy dia kely firy ny NT momba ny Kristiana izay mandray anjara amin'ny politika na miaro ny "soatoavin'ny fianakaviana" na mampiroborobo ny fandriampahalemana sy ny fahamarinana, na manohitra ny pôrnôgrafia na miaro ny zon'ity vondrona na iza nampahorina ity. Tsy miteny aho hoe tsy tokony hikarakara ireo raharaha ireo ny Kristianina. Mazava ho azy fa tsy afaka ny hanana olona feno fitiavana ny olona ianao ary tsy mampanahy azy amin'izany. Saingy tsy dia miresaka momba izany zavatra izany ny NT satria fantatr'Andriamanitra fa ny hany fomba hamahana ireo olana ireo sy hanasitranana ny fifandraisana tapaka dia ny fampidirana vaovao vaovao iray amin'ny fiainam-piainan'ny olona - ny mazoto ny fiainan'i Jesosy Kristy.
Fiainan'i Jesoa Kristy izay tena ilain'ny lehilahy sy vehivavy. Ny fanesorana ny haizina dia manomboka amin'ny fampidirana ny fahazavana. Ny fanesorana ny fankahalana dia manomboka amin'ny fampidirana ny fitiavana. Ny fanesorana ny aretina sy ny fanaratsiana dia manomboka amin'ny fampidirana fiainana. Mila manomboka manomboka mampahafantatra an'i Kristy isika satria izany no antso niantsoana antsika.
Nipoitra tao amin'ny tontolo sosialy mitovy amin'ny antsika ny filazantsara: fotoanan'ny tsy rariny, fisarahana ara-pirazanana, heloka bevava, haloto fitondran-tena, tsy fahatokisan-karena, ary tahotra mahatsikaiky. Ny Fiangonana tany am-boalohany dia niady mba ho velona mandritra ny fanenjehana tsy an-kiato sy famonoana izay tsy azontsika an-tsaina ankehitriny. Saingy ny fiangonana tany am-boalohany dia tsy nahita ny feony mba hiadiana amin'ny tsy rariny sy ny famoretana na hanamafisana ny "mety". Ny Fiangonana tany am-boalohany dia nahita ny adidiny ho taratry ny fahamasinan'Andriamanitra, hanambara ny voninahitr'Andriamanitra ary hijoro ho vavolombelona amin'ny maha-marina an'i Jesoa Kristy. Ary nataony tamin'ny alalan'ny fampisehoana mazava ny fitiavana tsy misy fetra ho an'ny fireneny sy ny olon-kafa.
Ny ivelany ivelany ny harona
Ho diso fanantenana izay rehetra mitady andinin-teny hanohana ny fitokonana, fanoherana ny fanaovana ankivy, ary hetsika ara-politika hafa mba hamahana ny lesoka sosialy. Jesosy dia niantso izao: "Manasa ny ivelany". Ny tena revolisiona kristiana dia manova ny olona ao anatiny. Manadio ny ao anaty kaopy izy io. Tsy manova ny teny manan-danja ao amin'ny afisy izay entin'ny olona iray fotsiny izany. Manova ny fon'ny olona izany.
Mivily lalana eto ny fiangonana matetika. Lasa variana amin'ny programa politika izy ireo, na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia. Tonga teto amin'izao tontolo izao Kristy hanova ny fiaraha-monina, fa tsy tamin'ny hetsika politika. Ny drafiny dia ny hanovany fiarahamonina amin'ny alàlan'ny fanovana ny olona ao amin'izany fiarahamonina izany amin'ny fanomezana azy ireo fo vaovao, saina vaovao, fanavaozana ny lalana, làlana vaovao, fahateraham-baovao, fiainana vaovao mifoha ary ny fahafatesan'ny tena sy ny fitiavan-tena. Rehefa miova toy izao ny olona dia manana fiarahamonina vaovao isika.
Rehefa miova avy ao anaty isika, rehefa voadio ny ao anatiny, dia miova ny fomba fijerintsika ny fifandraisan’ny olombelona rehetra. Rehefa miatrika fifandirana na fitsaboana tsy mety isika, dia mirona amin'ny fomba "maso mifanatrika". Fa Jesosy dia miantso antsika amin'ny karazana fanehoan-kevitra vaovao: "misaora izay manenjika anareo". Ny apostoly Paoly dia miantso antsika ho amin’izany karazana fanehoan-kevitra izany rehefa nanoratra izy hoe: “Miraisa saina ..... Aza mamaly ratsy ny ratsy ..... Aza manaiky ho resin’ny ratsy, fa reseo amin’ny ratsy ny tenanao. tsara". ( Romana 12, 14-21 ).
Ny hafatra nankininin'Andriamanitra ho an'ny Fiangonana dia hafatra manelingelina indrindra izay tsy henon'ny izao tontolo izao. Tokony hahemotra ve ity hafatra ity ho fankasitrahana ny hetsika ara-politika sy ara-tsosialy? Moa ve tokony hianina amin'ny zava-misy isika fa ny fiangonana dia fikambanana miafina, politika na fiaraha-monina fotsiny? Moa ve ampy ny fahatokisantsika an'Andriamanitra, ekena ve isika fa ny fitiavana kristianina, izay mitoetra ao amin'ny fiangonany, dia hanova an'ity tontolo ity fa tsy hery ara-politika sy fepetra hafa sosialy?
Miantso antsika Andriamanitra mba ho tompon'andraikitra amin'ny fanapariahana ity vaovao mahafaly sy miovaova ity ary i Jesoa Kristy hanova ny fiainana manerana ny fiaraha-monina. Amin'ity hafatra mahery sy manova sy tsy manam-paharoa ity dia tsy maintsy miditra amin'ny varotra sy ny indostria, ny fanabeazana ary ny fianarana, ny zavakanto ary ny fiainam-pianakaviana ary ny andrim-piarahamonina ny Fiangonana. Tonga tao amintsika i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty mba hamboly ny fiainany tsy misy farany ao aminy. Vonona izy ary afaka manova antsika ho olona be fitiavana sy manam-paharetana ary atokisanay, ka omena hery isika hiatrehana ny olana rehetra sy ny fitsapana rehetra. Izany no hafatray amin'ny tontolo reraka feno tahotra sy fijaliana. Izany no hafatry ny fitiavana sy ny fanantenana fa itondrantsika ho ao amin'ny tontolo tsy azo antoka
Miaina taratry ny fahamasinan'Andriamanitra isika, manambara ny voninahitr'Andriamanitra ary mijoro ho vavolombelon'ny fahatongavan'i Jesosy tonga hanadio ny lehilahy sy ny vehivavy ao anatiny sy ivelany. Miaina mifankatia sy maneho fitiavana kristiana eto amin'izao tontolo izao isika. Izay no tanjontsika, izany dia ny antso omen'ny Fiangonana.